Iindaba-Yeyiphi imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ulwakhiwo lomgca oluzenzekelayo?
Yeyiphi imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ulwakhiwo lomgca oluzenzekelayo lobeko?
1. Ukukhethwa koomatshini abaphambili nabancedisayo kumgca wemveliso yeshishini lokubumba kunye nolwakhiwo lomgca wemveliso. Uhlobo lwezinto ezichaphazeleka ikakhulu kuyilo lweemodeli, ezinje ngesanti eqhelekileyo yodongwe, isanti yesodium kunye nesanti yentlaka; iindlela zophando; Iindidi zeemveliso zesinyithi, ezinje ngentsimbi yentsimbi kunye nentsimbi yentsimbi; Ubungakanani bokuphosa kunye neemfuno zexesha lokupholisa; ukulahla umgangatho wemveliso kunye nokuchaneka kunokuchaphazeleka ngokuthe ngqo zizinto ezinje ngeemfuno.
2. Ifom, imigaqo kunye nokusebenza komatshini wokubumba zizinto ezithatha isigqibo ezichaphazela iintambo zomgca wemveliso. Umzekelo, nokuba usebenzise umatshini wokubumba oqhelekileyo okanye umatshini wokubumba oxineneyo, nokuba ngumatshini omnye okanye ulungelelwaniso lweyunithi, imveliso, oomatshini kunye nokuzenzekelayo, njl njl. umgca wemveliso.
3. Ukusebenza kunye nolawulo lwendlela yokuvelisa iya kuchaphazela uyilo loyilo loomatshini abancedisayo kunye nendlela yokufunda yokuma komgca wemveliso, umzekelo, oqhubekayo okanye ophakathi.
4. Ulawulo kunye neendlela zolawulo lomgca wemveliso kunye nesixhobo sokuthumela seempawu ezinxulumene nazo ziya kuchaphazela ubume bombutho wasekhaya womatshini wokuncedisa umgca wendibano kunye nokuhambisa izinto kunye nefom yoyilo yomtya.
5. Iimeko zeFektri kunye neemfuno zokukhusela okusingqongileyo zikwachaphazela ubeko loomatshini abaphambili nabancedisayo. Ukulungiswa kwendawo yokusebenzela endala kuya kuba nale miqobo eyahlukeneyo kunye neemfuno zolungelelwaniso lomgca wemveliso yeshishini lokubonisa. Ngamanye amaxesha iimfuno zokuthintela uthuli kunye nokunciphisa ingxolo yendalo esingqongileyo kwindibano yethu iya kuchaphazela nokukhethwa koomatshini abaphambili nabancedisayo. Umzekelo, ukulawula ngokungqongqo ingxolo, umgca wemveliso awunakusebenzisa isiqhulo esingcangcazelisayo, kodwa isihlukuhli segubu.
Ibhokisi yesanti, Flask zomngundo Machine, Ukubumba Ivoti Flask, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Esingxobeni Ukubumbela, Umatshini wokukroba ngaphandle,